‘जसले विशेष कुर्सी मुर्दावाद भन्छ,मेरो शैली त्यसैसँग मिल्छ’– माधव कुमार नेपाल - संवाद - नेपाल
माधव कुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता, नेकपा
नेकपाभित्र संस्थागत निर्णयको सट्टा किन व्यक्ति हाबी ?
संस्थागत ढंगले काम गर्ने, योग्यता–क्षमता हेरेर नेता/कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, विगतका अनुभवको राम्रो अन्तर्क्रिया गर्ने हो भने हामी राम्रो ढंगले अघि बढ्न सक्छौँ । जनताले ठूलो आशा/अपेक्षा गरेर नेकपालाई झन्डै दुई तिहाइ मत दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा तत्काल लोकप्रिय कदम पनि चाल्नुपर्छ । संस्थागत निर्णयको कमी हुँदा सरकार यहीँ चुकेको देखिन्छ ।
पछिल्ला दिनमा पार्टीभित्र निर्णायक हुँदै जानुभएको हो ?
मेरो पछि लागेका नेता/कार्यकर्ताको संख्या बढ्नुपर्ने, केपी कमरेडका पछि लागेकाको संख्या घट्नुपर्ने, म निर्णायक हुनुपर्ने, केपी कमरेडको घट्नुपर्ने कारण छैन । मेरो प्रतिष्ठा जति बढ्छ, त्यसले पार्टीकै प्रतिष्ठा बढ्छ । केपी कमरेडको प्रतिष्ठा जति बढ्छ, त्यसले पनि पार्टीकै प्रतिष्ठा बढ्छ । त्यसैले मेरो प्रतिष्ठा बढ्यो भनेर इर्ष्या गर्नुपर्ने छैन । केपी कमरेडको बढ्यो भनेर मैले इर्ष्या गर्नुपर्ने हुँदैन । प्रचण्डजीको प्रतिष्ठा बढ्यो भनेर मैले इर्ष्या गर्नुहुँदैन । जति धेरै नेता हुन्छन्, त्यति नै पार्टी बलियो हुन्छ । नेताको अभाव हुँदा पार्टीले चुनौती सामना गर्न सक्दैन ।
तपार्इं आफैँले पनि पछिल्लो समय सिंगो नेकपा भएर हेर्नुभएन भन्ने आरोप छ नि ?
मैले आफ्नो संख्या कम/बढी खोजेको होइन । मैले न्यायपूर्ण निर्णय हुनुपर्छ भनेर अडान राखेको हुँ । जसरी हामीले एकतापछि महाधिवेशनबाट चुनिएर आएकालाई नै केन्द्रमा अध्यक्ष चुन्यौँ, जिल्लासम्म पनि अधिवेशनबाट चुनिएर आएकालाई नै रोजौँ भनेको हुँ । केन्द्रमा महाधिवेशनबाट चुनिएर आएका केन्द्रीय सदस्यलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । जिल्ला कमिटी सदस्यमा पनि अधिवेशनबाट चुनिएर आएकालाई नै महत्त्व दिनुपर्छ भनेको हुँ । मैले मापदण्डको कुरा उठाउँदा कसैको टाउको किन दुख्ने ? माधव नेपाललाई मन पराउनेको संख्या ३९ भएछ । केपीलाई मन पराउनेको संख्या ३८ मात्र भएछ । यो तरिका ठीक होइन । ७७ जिल्लाकै अध्यक्षले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष मानेका छन् । माधव नेपाललाई पनि मानेकै छन् । साझा कार्यकर्तालाई पनि बाँडफाँट गर्ने ? महाधिवेशनका बेला आफ्नो इच्छाअनुसार मत दिएका होलान् । महाधिवेशनपछि कार्यकर्ताप्रति सबैले समभाव राख्नुपर्‍यो । कसैलाई पूर्वाग्रह राख्न भएन ।
मैले योग्यलाई बिनाकारण हटाउन हुँदैन भनेको हुँ । एउटै गल्ती गर्दा एउटालाई पुरस्कृत गर्ने, अर्कोलाई दण्डित गर्ने ? अर्कोलाई बेवास्ता गर्ने ? यस्तो गर्दा अन्याय हुन्छ । सजाय, मूल्यांकन कामका आधारमा समान र वैज्ञानिक हुनुपर्‍यो । मेरो जोड पार्टी विधिमा चल्नुपर्छ भन्ने हो ।
नेता जति धेरै हुन्छन्, उनीहरूको भूमिका त्यति भइहाल्छ नि । नेता घटाउन सकिन्छ ? कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर आएको त्यत्रो इतिहासलाई घटाउन सकिन्छ ? ऊ त पार्टी हाँकेर आएको नेता हो । उसले अनेक कार्यकर्ता जन्माएको छ । प्यार गरेको छ । छोरा पुस्ता, नाति पुस्ता होला । त्यसको मूल्यांकन हुँदैन ? योग्यता, क्षमताका आधारमा आएका न होलान् । कसैलाई क्रेनले तानेर ल्याएको छैन होला । योग्यता, क्षमता, खुबी, गतिशीलता, निष्ठा, इमानदारी, स्वच्छता, विश्वसनीयता यिनैले न काम गरेको हुनुपर्छ । यी भनेका पार्टीका पुँजी हुन् । सबैमा सबै गुण हुँदैन । कसैमा एक खालको खुबी हुन्छ, कसैमा अर्को खालको खुबी हुन्छ । यही खुबी र विशेषता भएको संगमस्थल हो, अहिलेको नेकपा । त्यसैले नेकपामा हामी सबैको उत्तिकै हक छ ।
आफ्नाबारे आफैँले गीत गाउनु उपयुक्त हुँदैन । पार्टीको सबैभन्दा बढी भलो हुने काममा मेरो पूर्ण साथ रहन्छ । मसँग कोही डराउनु पनि पर्दैन किनभने म षडयन्त्र गर्न जान्दिनँ । स्टेट फरवार्ड मान्छे हुँ । इमानदारी, निष्ठा, गतिशीलता, काम र जिम्मेवारी पालनामा प्रतिबद्ध छु । मलाई विश्वास गर्नुको कारण यही हो ।
मैले अडान लिन्नँ भन्ने आक्षेप छ भने राजा ज्ञानेन्द्रको शासनलाई उल्ट्याउन, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन, माओवादी सेनालाई पूरै नेपाली सेनाको मातहतमा ल्याउन, अनमिन र युएनएचसीएचआरलाई बिदाइ गर्न कसले अडान लिएको ? माओवादीसँग चुनौतीको सामना पनि गर्ने, मिलाएर, फकाएर ल्याउने काम पनि कसले गरेको ? ज्ञानेन्द्रभन्दा पहिले वीरेन्द्रसँग सहकार्य पनि गर्ने र अनुचित कार्य हुनेबित्तिकै मतभिन्नता राख्ने काम कसले गरेको ? कांग्रेससँग जुध्नका लागि पनि अघि बढ्ने र आवश्यकता पर्दा हात मिलाएर अघि बढ्ने काम कसले गरेको ? ०५१ मा पार्टीलाई सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा पुर्‍याउन, पार्टी विभाजनको संकटपछि फेरि पार्टी मिलाउन कसले भूमिका खेलेको ? माधव नेपालले कुनै भूमिका खेलेन ? केमा अडान लिएन ? बताइदिए हुन्छ ।
जहाँसम्म कार्यकर्ता सुरक्षाको कुरा छ, मैले कुन कार्यकर्ताको कहाँ र कहिले सुरक्षा गरेको छैन ? कतिपय अवस्थामा भने मैले खेलको नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु । त्यस्तो अवस्थामा मैले सधैँ पूर्वाग्रह राख्ने गरेको छैन । पार्टीलाई सधैँ मनमुटावमा राख्नुहुन्न । बदलाको भावना र पूर्वाग्रह राखिराख्ने नेता हुन सक्दैन । म सानो चित्त राख्ने नेता होइन । समग्र पार्टीको हित हेर्छु । एकताको सन्देश दिन चाहन्छु । ०३२ को कोअर्डिनेसन केन्द्रको स्थापनाअघिदेखि नै मेरो स्वभाव यही हो । म नेकपाभित्र सबैभन्दा बढी नेता/कार्यकर्ताको सुरक्षा दिने नेता हुँ ।
प्रचण्डले तपाईंलाई पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीका लागि तयार हुनुस् भनेर प्रस्ताव राख्नुभएको हो ?
यो पनि पढ्नुहोस : तेस्रा अध्यक्ष ?
ट्याग: संवादराजनीतिमाधव कुमार नेपाल